Bannaanbax ashtako ah oo lagu dhaliilayo qaabkii imtixaan-qaadista oo Badhan ka dhacay. – Radio Daljir
Bannaanbax ashtako ah oo lagu dhaliilayo qaabkii imtixaan-qaadista oo Badhan ka dhacay.
Seteembar 27, 2011 12:00 b 0
Badhan, Sept 27 ? Bannaanbax ballaaran oo looga cabanayo qaabkii uu u dhacay imtixaankii loo galay deeqdii waxbarasho ee dawladda Turkiga ayaa maanta ka dhacay magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag.
Bannaanbaxaan oo ay soo abaabuleen ardayda wax ka dhigata iskuulka ku yaalla magaalada Badhan, ayaa sidoo kale waxaa ka qayb-galay waalidiin, duqayda dhaqanka iyo qaar badan oo ka mid ah waxgaradka gobolkaasi.
Dadka bannaanbaxa dhigayey ayaa siweyn uga cabanayey habka loo maamulay deeqdii waxbarasho ee laga helay dawladda Turkiga taasoo ay u tartameen in ka badan 7,000 oo arday oo iskugu jirta dugsiyada sare iyo dhexe ee deegaannada Puntland, kana kala timid dhammaan gobollada Puntland.
Bannaanbaxayaasha ayaa meel-fagaare ah waxaa kula hadlay xubno ka tirsan maamulka magaalada Badhan iyo qaar ka mid ah waalidiin iyo wax-ku-oolka bulsho ee isla magaaladaasi Badhan, iyadoo halkaasi la isku hogo-tusaaleeyey qaabkii loo maareeyey deeqdii waxbarasho in aysan ahayn wadiiqo toosan, wasaaradda waxbarashadana lagu dhaliilay.
Dhinaca kale tan iyo intii la soo dhajiyey natiijada imtixaankii loogu tartamay deeqdii waxbarasho ee dawladda Turkiga, kana kala dhacay magaalooyinka Garowe iyo Galkacyo waxaa si aad ah isku soo tarayey cabashooyinka ka imaanaya gobollada kala duwan ee Puntland taasoo lagu sheegayey qaadista imtixaanka iyo soo dhajinyta natiijadaba in aan lagu salaynin caddaalad iyo garsoorid dhab ah midna.
Hal qof ku dhintay iyo afar kale oo ku dhaawacmay iska-hor-imaad daaq iyo deegaan la xiriira oo ka dhacay Karkaar.
“Waxaan maqlaa dilal qorshaysan, haddii la gartay inay qorshaysan yihiin, maxaa loo oggaan waayay cidda qorshaynaysa, waa arrin cajiib ah” Garaad C/llaahi Cali Ciid.